merolagani - कालिका पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता आईपिओ खुल्यो, कति गर्ने आवेदन?
कालिका पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता आईपिओ खुल्यो, कति गर्ने आवेदन?
कालिका पावर कम्पनी(KPCL) को १२ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आईपिओ) मा आवेदन खुलेको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १२ लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गरेको हो। जसमा छिटोमा असोज १ गते र ढिलोमा असोज २८ गतेसम्म आवेदन गर्न पाईनेछ ।
कम्पनीको आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ६ हजार कित्ताका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
Jul 08, 2019 09:32 AM
आँधिखोला लघुवित्तको ४ करोडको आईपीओ निष्काशन, असार २५ गतेसम्म भर्न पाइने
Jul 07, 2019 08:44 AM